Home Wararka Khasaaraha Ka iman kara Doorashooyinka Qof iyo Cod iyo Kaliteliyayaasha Ku Dhashay...
Khasaaraha Ka iman kara Doorashooyinka Qof iyo Cod iyo Kaliteliyayaasha Ku Dhashay Y. Museveni.
Akhrista si fiican uga bogo adiga oo aan qofna ugu darraaneyn khasaaraha ay Afrika ula yimaadeen doorashooyinka Qof iyo Cod ee uu Farmajo ku calaacalo inuu rabo inuu qobto. Waxaan mid mid u eegeyna hannaankan cusub ee lagu abuuro Kaligii taliye iyadoo galbeedka oo marmar ku hadaaqa demoqraadiyad ay ku aamusaan kuna gumeystaan dalalka Afrika mar kale marka kursiga ay ku hayaan kaligii taliye ay ogyihiin inuu been iyo boob doorashooyin qof iyo cod loogu yeeray ku haysto dalkaas.
Doorashooyinka qof ma aha kuwa hal habeen ku dhismi karaa ama ku kobca ee waxay maraan geeddisocod dheer, waayo maaha sanuduuqa iyo warqadda codka waxa loo baahan yahay oo kaliya ee waxaa loo baahan korriinsho bulsho oo wacyiga umadda ee ilaalinta dalka iyo kań siyaasiga ah waa inuu koraa dadkuna ay u bislaadaan inay sanduuqa aaminaan marka sanduuqu uu noqdo mid la aamini karo.
Waddama galbeedka ee daawo uga dhiga doorasho waddamada soo korayaa ma fiiriyaan duruufaha ka jira waddamadaas iyo sida fudud ee madaxdeedu isugu rogi karaa kalitaliyayaal khater badan oo ummadaas la dega.
Haddaba MOL waxay idiin soo bandhigeysaa malmahan khasaaraha uu leeyahay hannaanka doorasho ee cusub ee lagu abuuro kalitaliye iyo madaxda hadda sidaa ku jooga iyadoo aan u soo kala hormarin doonno sida ay saameynta noogu leeyhiin.
MadaxweyneyYoweri Kaguta Museveni Ugandha.Waxaa uu xukun ku qabsaday awood ciidan 1986, waxaanu durbaba bilaabay sidii uu ku dhisan lahaa asaaska iyo qaabkii uu dalka ku haysan lahaa inta uu nool yahay, waana hannaan cusub oo ay madaxda qaar ku abuurtaan saldhig adag oo ay ka galaan hannaanka doorashooyinka la yiraahdo qof iyo cod.
Muddo 10 sano markii uu dhisay jidkii loo mari lahaa hannaanka kalitalisnimo waxaa u bislaantay beerii uu seeska u soo dhigayey oo waxaa uu qabtay1996dii doorashada uu hadda Farmajo ku ooynayo ee qof iyo cod, waxaa uu Moseveni doorashadaas galay isagoo la sii ogyahay cidda soo baxeysaa sida Doorashadii Mahdi Guuleed ee aqalka sare. Wixii ka dambeeyey shanti sanaba waxaa la aadayey doorasho sidii damaashaadkii 21 Oktober1970-1990 ee Maxamed Siyaad, waxaana mar waliba ay ahayd shirib uu nin abwaan ku yiri markii Maxamed Siyaad la yiri waa la doortay 1979 oo waxaa dooratay 99.9% shiribkaas oo ahaa “ Nin Dooran Doorta Xow Dhahdeen Dadkasa Xow Dembaajiseen”.
Museveni waxaa uu sheegay in la doortay oo isaga ku guuleystay Doorashadii 1996-2001, tii 2001-2006, tii 2006-2011, tii 2011-2016, tii 2016-2021, tii 2021-2026, waa lix jeer. Bal qiyaas 20 sano oo ay Farmajo, Fahad Iyo Rooble nala sii joogaan?
Hadabba hannaanka doorashada ee Qof iyo Cod sow nooma cadda inuu yahay hannaan cusub oo lagu abuuro kalitaliye haddii bulshadaas aysan u bisleyn inay iska qabtaan marka uu kalitaliye bilaabo inuu habeysto guusha oo uu diido inuu qabto doorasho heshiis lagu yahay.
Khasab maaha qof iyo cod ee waxaa Khasab ah inay doorashada noqoto mid lagu heshiis yahay oo lawada aqbali karo waxa ka soo baxa, laakiin marka u qof rabo inuu dadka ku khasbo hannaan isaga uu rabo inuu ka faa’iideysto iyo inuu ku soo baxo, kadibna sida Museveni dunida u sheega waa la I doortay lix jeer dadkana ku khasba inay aqbalaan natiijada.
Arrinkaas waa waxa hadda ka shaqeynayaa Farmajo iyo Fahad oo uu hadda ku biiray RW Rooble oo runtii khiyaanay qalbiga dadka Somaliyeed kadib markii uu iska dhigay qof ka shaqeynaya wanaagga ummadda.
Somalida Mar rabto mar kale inay ku shiribto “ Nin Dooran Doorta Xow Dhahdeen Dadkasa Xow Dembaajiseen”.
Doorasho qof iyo cod waa taas Museveni ku haysa kuriga 35 sano iyo waliba 5ta soo socota oo u diyaarsan, kadibna uu rabo inuu wiilkiisa Maj Gen Muhoozi Kainerugaba uu ku wareejiyo hogaanka dalkaas Ugandha, kaas oo hadda ah Taliyaha guud ee Ciidamada qalabka sida ee Ugaandha.